October 22, 2020 – Xorriya Online
Xasan Cali Kheyre iyo Sheekh Shariif oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Nairobi ‘warbixin’
Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa gaaray maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoonaa markii uu halkaa gaaray durbadiiba kulan xasaasi ah la qaatay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo isna halkaas howlo shaqo u jooga. Mas’uuliyiintan oo kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka […]
Guddi-hawleed Kenyan ah ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday talooyin la xiriira isbeddelo lagu sameeyo dastuurka dalka, taasi oo ay qeyb ka tahay in la abuuro jagada ra’iisul wasaraaha, si loo yareeyo rabshdaha siyaasadeed. Warbixin muddo la sugayey, oo loo gudbiyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ninkii ay loolami jireen ee ay hadda xulufada noqdeen ee Raila […]
Warbixin: Soomaaliya oo kamid noqotay wadamada ugu wanaagsan ee kasoo kabsaday Covid-19
Dowladda Jordan ayaa Khamiista maanta ah waxa ay soo saartay liis casriyayn oo ay ku jiraan dhamaan wadamada Caalamka kaas oo u kala saaraya wadama kuwa Casaan ah, kuwa jaallaha ah iyo kuwa cagaaran marka la eego xaaladda COVID-19 ee waddan kasta oo dunida ka mid ah. Dowladda Jordan ayaa liiskaan uga gol leh in […]
Azerbaijan oo qabsatay dhul laga haystey muddo 30 sanadood ah
Dagaalka Nagorno Karabakh oo socda maalintii 26-aad, ayay ciidanka Azerbaijan waxay qabsadeen dhulka ku yaalla xadka Azerbaijan ay la wadaagto dalka Iran oo ay Iiraan haysatey muddo 30 sano ah, sida uu sheegay MW Ilham Aliyev, isagoo guushaas u dabaal degey. Ciidanka Azerbaijan ayaa sidoo kale xoreeyey ilaa 20 xaafadood oo ay horay u haysteen […]
Maxkamad laashay dacwad loo heystay fanaan waa hore dhintay
Xaakim dalka Mareykanka ku sugan ayaa laalay dacwad uu soo gudbiyay mid ka mid ah dadkii eedeymaha u soo jeediyay fannaankii dhintay ee Michael Jackson, kaas oo sheegay in shirkadaha Jackson ay u oggolaadeen xiddiggaas inuu tacaddiyo kula kaco isaga iyo carruur kale. James Safechuck ayaa sheegay in isaga oo 10 jir ah uu tacaddiyo […]
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka isaga xilka kaga horeeyay Barack Obama ayaa ereyo kul kulul is dhaafsaday intii ay socodeen isu soo bax dadweyne oo ka kala dhacaya gobolada Mareykanka. Obama ayaa Trump ku eedeeyay in uu yahay cunsuri ay ku fogaatay sareynta caddaanka, dhankiisa madaxweyne Trump oo ka hadlayay kulan lagu qabtay gobolka […]
Daawo: Maxaad kala socotaa barnaamijka baraha bulshada ku jira ee sawiradaada qaawin kara?
Sida ay qortay Bbc-da, Warbixin dhawaan lasoo saaray ayaa lagu sheegay in sawirrada haween tiradoodu ka badan tahay 100,000 oo wada qaawan lagu faafiyay app-ka Telegram, kaddib markii barnaamij tiknoolojiyad ah lagu khiyaanay sawirro ku jira baraha bulshada.
Wasiirka magacaaban ee maaliyadda oo kormeer ku tagey dekada Muqdisho “Sawirro”
Wasiirka magacaaban ee maaliyadda xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirahmaan Ducaale Beyle ayaa maanta kormeer ku tagay Dekedda Magaalada muqdisho oo ah isha ugu weyn dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka iyo masuuliyiinta maamulka Dekedda ayaa iska xog wareystay sida ay shaqada u socoto iyo dar-dar galinta u adeegidda ganacsatada Soomaaliyeed. Mudane Beyle ayaa sheegay in muhiimadda kormeerkiisa in […]
Daawo: Wasaarada boostada oo warbixin dhameysiran maanta kasoo saartay ciladii Internet-ka
War saxaafadeed ee maanta si wada jir ah usoo saareyn Wasaarada boostada & Tiknoolejiyada dowladda federaalka Soomaaliya & qaar kamid ah shirkadaha adeega Internet-ka ee dalka ayaa lagu sheegay sababta ugu weyn ee cilada Internet-ka dhalisay. Daawo warbixintii ay soo saareyn maanta Wasaarada Boostada & Tiknoolejiyada dowladda federaalka Soomaaliya & qaar kamid ah shirkadaha bixiya […]
Daawo: Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo maanta la dhaariyay
27-kii xubnood ee golaha deegaanka dagmada Glalkacyo ayaa maanta loo dhaariyay xilka loo doortay iyadoo ay goob joog ka ahaayeen wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali iyo wasiirka wasaaradaasi Cabdi Maxamed Jaamac oo iyagu la dardaarmay xubnaha la dhaarshay . Daawo qaabkii ay u dhacday dhaarkii Golaha deegaanka dagmada Gaalkacyo.